September 17, 2018 September 18, 2018 TV-Annapurna
तुल्सी अर्याल/काठमाडौं । भदौ ६ गते देखि सरकारले ट्याक्सी चालकलाई पहेलो रंगको ड्रेस कोड अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने नियम लागु गरेको छ । यातायात व्यवसायी संघ संयोजक रहने गरि नियम लागु भएको हो । ड्रेसकोड ट्याक्सी चालकले एसएस सिलाइ केन्द्र अनामनगर तथा रविभवन डल्लुबाट ३०० देखि ५०० रुपैयाँमा सजिलै उपलब्ध गर्न सक्ने छन् । ट्याक्सी रोकिरहेको बेला सर्वसाधरणलाइ ट्याक्सी चालक चिन्न सहज होस् भनेर यो नियम लागु गरिएको हो । तर राजधानीमा भने यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिन्छ । हामीले राजधानीका केहि मुख्य स्थानहरुमा अवलोकन गर्यौ । ती स्थानहरुमा पुग्दा…
September 15, 2018 TV-Annapurna
डिएनएबारे निकै सुनिन्छ । कसैको आमा–बाबु पत्ता लगाउन पनि डिएनए गर्ने प्रचलन विश्वभर छ । तर, यसको काम र यो कसरी सन्तानमा सर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । यसबारे नर्थ डकोटा स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता अनुज घिमिरेले लेखेका छन् : डिएनए अर्थात् डिएनएको पूरा रूप डाइअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड हो । यो एकप्रकारको जटिल अणु हो । जसले एउटा प्राणी बनाउने, त्यसको विकास र प्रजननलाई निर्देशित गरी सकुशल राख्ने काम गर्छ । हाम्रो शरीरको हरेक कोषाणुमा डिएनए हुन्छ । सामान्यतया डिएनए कोषाणुमा पाइन्छ । माइटोकोन्ड्रियामा पनि यसको…
September 14, 2018 September 14, 2018 Annapurna TV
अमेरिकाको ओरेगनमा सन् २०१७ मा जोशुआ हार्नरलाई अदालतले बाल यौन शोषणको मामलामा दोषी ठहर गर्यो । तर एक कुकुरका कारण यो घटनामा नयाँ मोड आयो र हार्नर ५० वर्षको सजायँबाट मुक्त भए । यो सबै एक ल्याब्राडोर कुकुर ‘लुसी’ का कारण भएको थियो । ४२ वर्षका हार्नरमाथि एक बालिकालाई यौन शोषण गरेको र प्रमाण मेटाउनका लागि लूसीलाई गोली हानिएको आरोप लागेको थियो । तर पछि लूसी आफ्ना नयाँ मालिकसँग भेटिएपछि हार्नर सजायँबाट बचेका हुन् । ‘लूसी जीवित भेटिइन्’? मूल केसको सुनुवाईको क्रममा पनि अदालतले सर्वसम्मत निर्णय दिएको थिएन । गैर…
सदियौँदेखि उठिरहेको प्रश्नमध्ये एक हो, दुनियाँमा अन्डा पहिला आयो कि कुखुरा रु यो प्रश्नले सर्वसाधारणमात्र होइन वैज्ञानिकहरुको पनि दिमाग रन्थनाइरहेको छ । तपाईं नै भन्नुहोस्– अन्डा पहिलो आयो कि कुखुरा ? तपाईं जवाफ दिनुहोला, अन्डा पहिला आयो अनि त्यसबाटै कुखुरा बन्यो । त्यसो भए त्यो अन्डा दियोचाहिँ कसले त ?कुखुरा पैदा हुने एउटै माध्यम अन्डा हो । उसो भए पहिला कुखुरा आयो । यो जवाफ पनि काम लाग्दैन, किनकि कुखुरा आउन अन्डा नभई सम्भव छैन । अब तपाईं आफ्नो कपाल लुछ्न थाल्नु हुनेछ । दिमाग तात्न थाल्नेछ । तर पनि…
September 8, 2018 TV-Annapurna
पुरुष र महिलामा ठ्याक्कै देखिने फरक भनेको दाह्री हो । पुरुषमा दाह्री आउँछ तर महिलामा आउँदैन । महिलाको शरीर निकै सुकिलो हुन्छ । आखिर किन आउँदैन त महिलामा दाह्री ? यसकारण आउँदैन जन्मँदै पुरुष र महिलाका ग्रन्थि फरक–फरक हुन्छ । पिट्युटरी ग्लानले सबैमा एकै किसिमले काम गर्छ । उसले जब टार्गेट अग्र्यानमा आफ्नो काम गर्न थाल्छ, त्यसपछि पुरुष र महिलामा फरक–फरक हर्मोन उकास्न थाल्छ । महिलाको ओभरीमा काम गरेर स्ट्रोजेन, प्रोजेस्टोरन हर्मोन उकास्न थाल्छ भने पुरुषमा टेस्टेस्टेरोन हर्मोन उकास्छ । स्टेस्टेरोन पुरुष ग्रन्थिबाट निस्कने हर्मोन हो । महिलामा दाह्री आएमा यदि स्ट्रोजन, प्रोजेस्टोरेन निस्किनुपर्नेमा स्ट्रोजनको केही अंग टेस्टेस्टेरोनमा…
इण्डोनेशियाको आचेह प्रान्तको एक जिल्लामा महिला र पुरुषलाई सँगसँगै बसेर खाना खान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मुस्लिम बहुल रहेको यो जिज्लामा अब पुरुष र महिला एकअर्कासँग विवाहित वा नातेदार भए मात्र सँगै बस्न पाउने छन् । अधिकारीहरुले यस नियमले महिलाहरुलाई बढी ‘संस्कारी’ बनाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । इण्डोनेशियाको आचेह प्रान्त इण्डोनेशियामा इस्लामिक कानुन लागु गर्ने एक मात्र प्रान्त हो । सन् २००५ मा लामो समयको पृथकतावादी युद्ध अन्त्य गर्नको लागि यस प्रान्तलाई स्वायत्तता दिइयो । त्यसपछि यस प्रान्तका राजनीतिज्ञले सन् २००९ मा यस प्रान्तमा सरिया कानुन लागु गरे ।…
September 5, 2018 September 5, 2018 Annapurna TV
आँप सबै उमेर समूहले रुचाउने फल हो । हामी सबैको रोजाइमा आँप पर्ने भएपनि आँपको पातका फाइदाबारे कमैलाई मात्र थाहा छ । आँपको पात अरु फलफूलको पात जस्तै देखिन्छ । आँपको पातमा भिटामिन ए, बी, सी जस्ता पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाईन्छ । साथै यसमा फ्लेभोनोइड र फेनोल जस्ता तत्वहरु पाईन्छ । र यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ । त्यसैले आँपको पात रोगको उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । र यसले मानव शरीरमा राम्रो प्रभाव पार्दछ । यसले निम्न ७ रोगहरुबाट बचाउँदछ । मधुमेह स् आँपको पातमा एन्थोक्यानिडिन्स पाईन्छ । जस्ले…
September 4, 2018 Annapurna TV
नारीलाई बुझ्न कठिन हुन्छ । महिलाहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहार १ महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन…
तपाइलाई ग्याष्ट्रिकको समस्याले सताएको ? अथवा शरीरको कुनै भाग सुन्नीएर हैरान हुनुभएको छ ? अब चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईको त्यो समस्या लसुनले क्लियर गर्छ । मानिसले लसुनको खेती गर्न थालेको पाँच हजार वर्ष भइसक्यो । मानव स्वास्थ्यका लागि गुणकारी लसुन खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । लसुनको टुुप्पो बिहानै खाँदा धेरैथरी रोगबाट बच्न सकिन्छ । अझ खाली पेट लसुन खाँदा यसले पेटका हानिकारक ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ । ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले बिहान खाली पेटमा तातो पानीसँग लसुन खादा निकै फाइदा पुग्छ । लसुनका अन्य पनि धेरै फाइदा छन् । तपाईं मुसा तथा फंगल संक्रमणबाट…
September 4, 2018 September 4, 2018 Annapurna TV
नेपालका गर्मी स्थानमा जताततै पाइन्छ रिठ्ठा । गाउँघरतिर रिठ्ठलाई तौलेर किलोको हिसाब गरि बेच्ने चलन छ । साधारण हाम्रो बुझाइ रिठ्ठाबाट साबुन, स्याम्पु बन्छ भन्ने छ । यो कपाललाई बलियो र कालो बनाउनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । तर धेरैलाई थाहा नहोला यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान पनी गर्ने गर्छ । माइग्रेन माइग्रेन भएपछि शिरको आधी भागमा चर्को पीडा हुन्छ । रिट्ठाको प्रयोगले पीडाबाट राहत पाउन सकिन्छ । रिट्ठाको धूलोमा अलिकति मरिच र पानी मिसाउनुस् । यो घोललाई चारपाँच थोपा नाकमा हाल्दा माइग्रेनको पीडा भाग्छ । दम दमको रोगीलाई…